बेला बेलामा काँध वा गर्दनबाट कड्क कड्क आवाज आउँछ ? हुनसक्छ यस्तो कारण • raradiodarpan.com
शरीरका विभिन्न भागबाट विभिन्न किसिमका आवाज आउने गर्छन्। जस्तै औंलाबाट चटकन, हड्डीबाट कट कट, पेटबाट गुडगुड। सामान्य रुपमा यी आवाजलाई हल्का रुपमा लिने गरिन्छ।
तर विज्ञका अनुसार शरीरका केही यस्ता आवाज गम्भिर रोगका संकेत पनि हुनसक्छन्। ती आवाजले तत्काल असर नदेखाएपनि विस्तारै विस्तारै शरीरलाई बढी खतरामा पार्ने गर्छन। त्यस्ता यस्ता आवाजलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन।
काँधबाट कड्क कड्क आवाज
कयौँ पटक हलचल गर्दा वा अचानक हात माथि उठाउँदा यदी तपाईको काँधबाट कड्क कड्क आवाज आउँछ भने सावधान रहनुहोस् । यस्तो आवाज प्रायः काँधको जोर्नेबाट आउने गर्छ। विशेषज्ञका अनुसार लामो समयसम्म हातलाई उठाएर काम गर्दा मांशपेसीमा पीडा हुने गर्छ।
समान्यतः यस्ता आवाज आफै हराउने गर्छन । तर यस्तो आवाजले तपाईको काँधमा पीडा महशुस हुने गर्छ भने खतराको संकेत हुनसक्छ। यसरी पीडा हुनुको कारण काँधको कार्टिलेजमा केही गडबड हुनसक्छ। यदी तपाईलाई प्रायः यस्तो पीडा हुनथाल्यो भने तुरुल्त चिकित्सको सल्लाह लिनु राम्रो हुने गर्छ।
गर्दनबाट टक टकको आवाज
गर्दनबाट टक टक आवाज आउनुको मतलब तपाईको उमेर धेरै हुनु होइन। वास्तवमा गर्दनको भाग कयौँ जोर्नीबाट मिलेर बनेको हुन्छ।
गर्दनमा भएका कयौँ जोर्नेलाई फेसेट जोर्ने भनिन्छ। हरेक जोर्नेमा द्रब भरिएको हुन्छ र क्याप्सुलले घेरिएको हुन्छ। गर्दनलाई घुमाउँदा झिल्लीमा तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ र जोर्नमा परिवर्तन देखिन्छ।
यस्तो समस्या देखिनु स्वास्थ्यका लागि हानी कारण मानिन्छ। यस्तो समस्या लामो समयसम्म देखियो र तपाईलाई पीडा पनि महशुस भइरह्यो भने तुरुन्त चिकित्सको सल्लाह लिनु राम्रो मानिन्छ।
यो पनि पढौ : जवानीमै कपाल फुल्यो ? मेहेन्दी हैन, यी उपायबाट बनाउनुहोस् केही दिनमै कालो र मुलायम
आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीका कारण हामीले आफूलाई धेरै समय दिन पाउँदैनौँ । जस कारण हाम्रो शरीरमा निकै समस्या देखिने गर्छन्। यस बाहेक बढ्दै गएको प्रदूषण पनि हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानी कारक हुने गर्छ।
बढिरहेको प्रदूषणको असर सबैभन्दा बढी हाम्रो कपाल र छालामा पर्ने गर्छ। जवानीमै कपाल फुल्ने समस्या आजभोलि हर व्यक्तिका लागि देखिन्छ। आज हामी तपाईलाई केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसले गर्दा तपाईको सेतो कपाल छिट्टै कालो हुने गर्छ।
सेतो कपाल कालो बनाउन अपनाउनुहोस् यी घरेलु उपायः
१) सेतो कपाल कालो बनाउनका लागि अमला र रिठाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा फलामको कडाइमा अमला र रिठाको पाउडरलाई रातभर भिजाइदिनुहोस्। त्यसपछि बिहान कपालमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् सुकेपछि सफा पानीले त्यसलाई धुनुहोस्। हप्तामा २–३ पटक यो उपाय अपनाउँदा तपाईको कपाल चाडै कालो बन्न थाल्छ।
२) एलोभेरा लगाउँदा पनि कपाल चमकदार हुने गर्छ। तेल लगाउनुअघि कपालको जरामा एलोभेरा जेल लगाउनुहोस् । यसो गर्दा तपाईको कपाल कालो हुने गर्छ।
३) प्याजको रस पनि निकै उपयोगी मानिन्छ। प्याजको रसलाई कपालको जरामा लगाउनुहोस्। सुकेपछि कपाललाई स्याम्पु लगाएर धुनुहोस्। यो उपाय हप्तामा २,३ पटक गर्दा पनि तपाईको सेतो कपाल कालो हुन थाल्छ।
४) सेतो कपाललाई कालो बनाउनका लागि मेथी पनि निकै उपयोगी मानिन्छ। रातभर मेथीलाई पानीमा भिजाउनुहोस् र बिहान त्यसलाई पिनेर कपालमा लगाउनुहोस्। यो सुकेपछि स्याम्पु लगाएर पखाल्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईको कपाल केही दिनमै कालो र चम्किलो हुनथाल्छ।